Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 10/07/2019
(နေပြည်တော်၊ ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်)Gov’t of India hands over 250 pre-fabricated houses to Rakhine State Gov’t for use of returnees
The ceremony to donate 250 pre-fabricated houses by Government of India to Rakhine State Government for returnees was held in Maungtaw on9July 2019.
At the event, Ambassador of India explained the purpose of the donation and handed over the documents related to houses to Joint Chairman of Returnee Resettlement Work Committee. Then, Union Minister Dr. Win Myat Aye said according to MoU signed between Myanmar and Indian Governments, for the development and resettlement in Rakhine State, India will support US$5million5consecutive years which is 25 million in total. He also added that they are working together for 22 collaborative projects for the development of Rakhine State in many sectors. And assistance from neighboring countries such as India and China, AESEAN countries and Japan has been great help in repatriation and resettlement of displaced people.
Coordination meeting on providing shelter, aid to displaced people in Rakhine State is held
A coordination meeting on providing shelter and aid to displaced people in Rakhine State was held at Rakhine State Government office on9July 2019.
At the meeting, Union Minister Dr. Win Myat Aye said that Rakhine State government and Union government are working together for the people displaced by conflicts. The government is building temporary shelters for displaced people. Necessary shelters were built in cooperation with local people and are intended for temporary use. And he urged the officials to express their needs and suggestions. Then, ministers of Rakhine State Government detailed matters regarding IDPs taking temporary shelters, food provision and health care.
Afterwards, they went on to discuss repatriation and resettlement of displaced people and assistances for those who did not desire to leave their place in collaboration of ASEAN and UN organizations and international help through UEHRD.
နေရပ်စွန်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသော နေအိမ်များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်
နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသည့် နေအိမ် (၂၅၀) လုံး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို မောင်တောမြို့၌ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Shri Saurabh Kumar က လှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းရင်းကို ပြောကြားပြီး အိမ်ရာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရေးထိုးထားသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅သန်းဖြင့် ၅နှစ်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ထောက်ပံ့သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း ၂၂ ခုကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများသာမက ဂျပန်နိုင်ငံ စသည့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အကူအညီအထောက်အပံ့များသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများနှင့် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးမှုများအတွက် များစွာအကူအညီ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် ယာယီစခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို ဇူလိုင်လ ၉ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ရှိ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် ယာယီခိုလုံရန် နေရာများကို အစိုးရက တာဝန်ယူ၍ ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ လိုအပ်သော ယာယီစခန်းများ တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယာယီနေထိုင်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဆွေးနွေးအကြုံပြုပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ၏ ယာယီခိုလုံမှု အခြေအနေ၊ ရိက္ခာရရှိမှု အခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေ စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ၊ နေရပ်စွန့်ခွာခြင်းမပြုပဲ ကျန်ရှိသူများအား နေရာချထားရေးနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရေးတို့တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် စီမံချက်များ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများက UEHRD မှ တဆင့် ထောက်ပံ့ကူညီကြမည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။